Nri na-enye nri, Line Cing Feed Stamping Line, Nc Servo Coil Sheet Feed Line Productionrs and Aid in China
Nkọwa:Nhazi nri,Mkpịsị aka Nri Stamping,Coil Line Systems,Nc Servo Press Line Line,Nhazi Onye Nhazi,Mkpịsị aka mkpuchi & Lije Pressfeed
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Nhazi nri
Ngwaahịa nke Nhazi nri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Nhazi nri , Mkpịsị aka Nri Stamping suppliers / factory, wholesale high-quality products of Coil Line Systems R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Nkọwapụta Isi Okwu Servo Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Nc Decoiler Straightener Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Punching Press 3 Na 1 ngwa nri  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye akpaaka 3 n’ime 1  Kpọtụrụ ugbu a
Feeding na enye nri dika nri  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener NC Servo Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Ngw’oru ígwè  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye ọnụnọ nke na-adịghị ahụ nri  Kpọtụrụ ugbu a
Osisi udiri nri Mayflay  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener NC servo Feeder maka akara akuko  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat Decoiler Straightener Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na - eke nri Uncoiler Straigthener Nc Servo Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Automatic Press Line Servo Feeder na Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
3 n'ime 1 Servo Feeder Straightener Cum Decoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Nc Servo Feeder Uncoiler Straightener maka Press  Kpọtụrụ ugbu a
Nkọwapụta Isi Okwu Servo Straightener
CO IL SERVO STRAI GHTENER FE EDER Ihe mkpuchi Cove Servo Straightener dị na mkpụmkpụ oghere sara mbara ka etolitepụtara nke ọma iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba...
NC DECOI LER STRAIGHTENER FE EDER Nc Decoiler Straightener Feeder dị na mkpụmkpụ oghere imewepụtara ngwa ngwa iji gboo mkpa ndị ahịa na-ezughi oke. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta...
Punching Press 3 Na 1 ngwa nri
IHU PRE SS 3 NA 1 FEE DER EGO Punching Press 3 Na 1 Akụrụngwa ndị na-azụ ihe dị mkpụmkpụ sara mbara ka emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka...
Onye na-enye akpaaka 3 n’ime 1
AUTOMATION FEE DER 3 NA 1 Ndị na - enye Ndị na - enye Ndị ọrụ ugbo ala 3 na 1 dị n'ime obere oghere emere ka ọ pụta ìhè iji gboo mkpa ndị ahịa na - enweghị ohere zuru ezu. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha...
Feeding na enye nri dika nri
UNWI NDING LEVE LING FEE DING Emebere igwe nri ka ọ dị obere, ọ bụ n'usoro nke oghere dị mkpụmkpụ ka emepụtara iji gboo mkpa ndị ahịa na-enweghị ohere zuru ezu. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba...
DECOI LER STRAIGHTENER NC SE RVO FEEDER Decoiler Straightener NC Servo Feeder dị na mkpụmkpụ oghere imewe bụ nke emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba...
Ngwunye Ngw’oru ígwè
STEEL CO IL MAKA ING EGO A na-emepụta ngwa ngwa igwe anaghị agba nchara dị na obere ohere iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka...
Onye na-enye ọnụnọ nke na-adịghị ahụ nri
UNWINDER STRAIGH TENER FEEDER Ndị na - ahụ maka ihe na - adị ọcha ma dị mkpụmkpụ sara mbara ka emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta...
Osisi udiri nri Mayflay
Enwere ike ime ka akwụkwọ nri maka ihe ọkụkụ Mayflay na kọmpụta mara mma maka obere oghere dị obere yana ọ bụrụ na enweghị obere ihe mkpuchi na nnukwu ihe. A na-ejikarị ha ogologo oge ogologo nke etiti na ọnụọgụ pịa nke nkeji kwa nkeji. Ekeputa...
Decoiler Straightener NC servo Feeder maka akara akuko
A na-ekepụta Decoiler Straightener NC servo Feeder maka akara akuko nke Decoiler Straightener na NC servo Feeder, ọ dịkwa mma maka ya. Kwesịrị ekwesị maka usoro mmịpụta, akara akara , akara laser na ọtụtụ usoro ọrụ ndị ọzọ. Enwere ike itinye mgbanwe...
Ndị na-ahụ maka nri Decoiler Straightener nwere ike ịrụ ọrụ ọkpụrụkpụ site na 0.4 mm ruo 4.5 mm na obosara nke sitere na 70 ruo 1300mm na ịdị arọ ruo 10tons dabere na mkpa nke onye ahịa ahụ. Enwere ike ịgwakọta ụdị ihe dị iche iche, site na ndị dị...
Nc Roller Fertightight Uncoiler Machine 3 Na 1 maka eriri chassis akụkụ cha cha akụkụ. Fuction nke Line Press Line dị ka okpuru: Ngwa ihe eji emeghari ka ihe eji eme ihe bu ihe ndi edobere, nye ndi oru ugbo ala nke edo edo, ndi na aru oru ike Nnukwu...
Automatic Press Line Servo Feeder na Straightener
Automatic Press Line Servo feeder With Straightener bụ ikike hazie ihe na ma n'elu ma ọ bụ ala payoff si uncoiler nke kacha egosipụta. Automatic Press Line Servo Feeder with Straightener mejupụtara nkeji abụọ, otu bụ ihe eji achọ mma nke nwere...
3 n'ime 1 Servo Feeder Straightener Cum Decoiler
Ọrụ nke 3 n'ime 1 servo feeder straightener cum Decoiler 1 . Izi ezi di elu: +/- 0.1mm. 2. Chekwaa mpaghara akuku. 3. Japan servo moto, PLC na akụkụ eletriki ndị ọzọ s, ogologo oge na-eji. 4. Ọrụ dị mfe, nchekwa na nkwụsi ike dị elu. 3 n'ime...
Nc Servo Feeder Uncoiler Straightener maka Press
Ezubere eriri mkpirisi kọlụm arụpụtara maka ịhazi ngwaahịa mkpuchi na mpaghara iji chekwaa oghere. Eriri eriri igwe na-ejikọ igwe eji etinye igwe eji ekpuchi ya, servo na-achịkwa elektrọnik & onye na-enye ya nri na ụgbọ ala na - ebunye ya ihe...
China Nhazi nri Ngwa
Mgbe na-arụ ọrụ na-arọ na ngwaahịa ma ọ bụ obere ohere, eriri igwe Ịnụrụ edoghi enye ọhụrụ, eri-irè eriri igwe nhazi ngwọta. Ijikọta ịgbatị na nri na- eme ka eriri ogologo oge na-adị n'etiti Straightener na Servo Roll Feed .
Ngwunye eriri nri na- enye ndị ahịa azụmaahịa zuru oke maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile dị na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na igwe na-akpụ akpụ, dịka brake pad, ogidi nke ihu, oche ọdụ ụgbọ ala, ogidi etiti, tụgharịrị na ihe ndị ọzọ.
Site na sistemụ inye anyị nri ị nwere ike hazie obosara ihe mkpuchi site na 400mm ruo 1300mm, ọkpụrụkpụ mkpuchi sitere na 0.4-4.5mm, eriri coil dị ka 10000kgs.
Ngwaahịa anyị na- aghuta usoro inye nri na kọmpụta zuru ezu yana kọmpụta kọmpụta, maka inyeju coil ihe gaa na igwe okwu.
Nhazi nri Mkpịsị aka Nri Stamping Coil Line Systems Nc Servo Press Line Line Nhazi Onye Nhazi Mkpịsị aka mkpuchi & Lije Pressfeed Nri nri Ngwa nri